Aingam-panahy CBD price
Inona no atao hoe harato V +
Inona no atao hoe CBD?
CBD dia fohy ho an'ny Cannabidiol, dia iray amin'ireo malaza indrindra-mitranga voajanahary cannabinoid singa ao amin'ny rongony fototra. Tsy toy ny molekiola iray hafa malaza, tetrahydrocannabinol (THC), CBD tanteraka tsy psychoactive ary tsy mahatonga anao hahatsapa "ambony". CBD Na dia iray monja amin'ireo maherin'ny 60 cannabinoids hita ao amin'ny rongony fototra, fikarohana siantifika maro no nilaza fa manana ny lehibe indrindra CBD fitsaboana mety rehetra ny cannabinoids.
CBD azo ampy amin'ny hemp sy ny rongony. Rehetra ny CBD dia homarinana avy amin'ny voajanahary, fototra-monina hemp, izay ara-dalàna amin'ny fanjakana rehetra 50. CBD homarinana avy amin'ny hemp dia manan-karena amin'ny fanafody sy fitsaboana tombontsoa, ​​ary mazava ho ambany in THC.
Inona no atao hoe CBD lalàna?
Inona no maha samy hafa ny hemp sy ny rongony?
Na zavamaniry na dia ao anatin'ny karazana iray ihany, ary ny rongony hemp manana fahasamihafana lehibe.
1) a.Hemp mitombo hatramin'ny 15 tongony lava sy lava goavana bary, dia niara-teny famporisihana feno akaiky.
2) a. Mahalana rongony Mihoatra 5 tongony, ary mitombo avo kokoa outwards amin'ny ravinkazo sy hitsimoka, zavamaniry isan-toerana mila mitombo.
Amin'ny na rongony sy ny hemp, cannabinoids roa karazana miavaka: Tetrahydrocannabinol (THC) & Cannabidiol (CBD)
1) Hemp no zara raha misy THC amin'ny rehetra kosa amin'ny eo ho eo afa-po eo amin'ny 0.05-1%. Hemp misy CBD kokoa noho ny eo ho eo rongony fototra.
2) eo ho eo Flowers ny rongony fototra misy THC haavon'ny ny 10-14%.
2) Misy menaka rongony 50-60% THC, 10-15% CBD.
4. fampiasana ny menaka tsirairay
1) hemp, avo CBD, ambany THC afa-po, matetika ampiasaina ho sasatra, moisturizing, mampitony, nampitony.
2) rongony, avo THC, ambany CBD afa-po, matetika ampiasaina ho an'ny fialam-boly sy ny psychoactive.
CBD, fohy ny cannabidiol, dia tsy psychoactive simika Kamban-teny ao amin'ny rongony, tompon'andraikitra maro cannabises ny soa ara-pitsaboana. Etsy an-danin'izany, THC, fohy ny tetrahydrocannabinol, psychoactive iombonana amin'ny rongony, izay mahatonga ny "avo", mifandray amin'ny rongony olana, izy roa samy hafa tanteraka cannabinoids, izay ny kilasy simika zavatra simika.
1) Ny Avo
THC dia mety diso fantatra amin'ny maha ilaina ny psychoactive amin'ny rongony. CBD, na izany aza, dia tsy psychoactive. Amin'ny teny hafa, tsy afa-CBD avo anao. Raha mandiso fanantenana ny fialam-boly mpampiasa, io endri-javatra tsy manam-paharoa ny CBD no mahatonga azy io mba manintona toy ny fanafody.
Doctors matetika kokoa amin'ny kely dia kely fitsaboana vokany, izay efa sakana lehibe ho amin'ny fanekena ny rongony ara-pitsaboana. Toy izany koa, CBD dia nampiasaina mba hitondra ny ankizy kely amin'ny aretina isan-karazany.
THC fantatra mba hahatonga ny olona sasany hahatsapa manahy na misavoritaka. Fa CBD dia heverina no nifanohitra. Raha ny marina, dia maneho ny fanadihadiana fa CBD miasa mba hanohitra ny tebiteby vokatry ny nahatelina THC. Maro ny fampianarana ihany koa ny milaza fa afaka mampihena ny fanahiana CBD rehefa itantanana eo ny azy.
Ankoatra ny tsy psychoactive, CBD antipsychotic toa manana fananana. Ny mpikaroka mino fa mety tetikasa rongony CBD mpampiasa tsy hahazo avo loatra amin'ny alalan'ny fampihenana ny psychosis-toy ny vokatry ny THC. Na izany aza, ny saina-mifehy ny asa manova ny THC dia tsy izay rehetra tsara ho an'ny CBD. Amin'ny fotoany avy izy, dia ho CBD pitsapana toy ny antipsychotic fanafody ho an'ny olona manana aretin-tsaina.
Ny iray amin'ireo fahita indrindra fampiasana ny rongony dia tahaka ny torimaso fanampiana. THC dia inoana fa tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny rongony ny torimaso-nitarika vokany. Amin'ny lafiny iray, fikarohana milaza CBD mba hampiroboroboana ny asa eo amin'ny lafiny, ka CBD ny mahantra safidy toy ny torimaso fanafody. Ny mifanohitra vokatry ny CBD sy THC-mandry dia mety hanazava ny antony sasany mahatonga sorisory ao rongony mpampiasa hahatsapa rendremana ny hafa kosa dia fantatra ny hampitomboana ny angovo.
Ny ankamaroan'ny firenena manana lalàna hentitra manodidina ny rongony sy ny THC, ny ara-dalàna toerana misy CBD no tsy mazava. Any Etazonia, dia ara-teknika CBD tsy ara-dalàna satria dia sokajiana ho toy ny zava-mahadomelina aho Fandaharana ambanin'ny lalàna federaly. Ny fanafody amin'ny teny CBD, atao hoe Epidiolex, dia vao haingana ihany no nanala ny FDA ny ho sedraina amin'ny ankizy mafy androbe.
Etsy an-danin'izany, dia hita ao amin'ny CBD hemp, izay ara-dalàna azo nohafarana, ary nivarotra tany Etazonia orinasa sasany efa naka tombony izany fialan-tsiny ihany ny fanafarana avo-CBD hemp voajanahary koa omen'ny avy any amin'ny firenen-kafa izay hemp no novokarina.
Misy fahasamihafana eo amin'ny hemp CBD sy ny rongony CBD?
"CBD dia CBD-Tsy olana izay ihaviany."
Eny izany no zava-dehibe. Ny voninkazo-tampon sy ny ravina sasany hemp sorisory ao orinasa dia mety ho azo iainana loharanom-CBD (olana ara-pitsarana na dia teo aza), fa hemp dia tsy midika hoe ny tandrify loharanom-cannabidiol. Industrial hemp matetika dia ahitana kely lavitra noho CBD cannabidiol-manan-karena rongony. Be dia be ny orinasa hemp no takiana mba hanesorana kely ny CBD, amin 'izany mitaiza ny mety poizina loto, satria hemp dia "mombamomba-accumulator" izay mitaona metaly mavesatra avy amin'ny tany. Single-môlekiola CBD voafintina ao amin'ny laboratoara na nalaina sy voadio avy amin'ny orinasa tsy ampy mitsikera hemp terpenes fanafody sy ny faharoa cannabinoids hita ao amin'ny rongony sorisory ao. Ireo Kamban-teny mifandray amin'ny CBD sy THC mba hanatsarana ny fitsaboana soa.
Nahoana no CBD no ara-dalàna?
Araka ny 2014 Farm Bill nosoniavin'ny Filoha Barack Obama, Fizarana 7606 amin'ny 2014 Farm Bill alalana ny fivoarana sy ny fambolena indostrialy hemp, izay toa valy CBD notsoahina.
Fa ny maha ara-dalàna ny CBD (cannabidiol), Ny fahasamihafana lehibe indrindra dia THC ambaratonga. Raha rongony zavamaniry misy ambaratonga avo ny THC, hemp ahitana firy ny psychoactive simika, misy tsy mihoatra ny 0.3% THC. Io fahasamihafana tokana no tena miantehitra hanavaka hemp amin'ny rongony.
Industrial Hemp Fambolena Act ny 2013 - hanonitra ny maso akora hetsika manilika orinasa hemp avy amin'ny famaritana ny "rongony." Dia mamaritra ny "indostrialy hemp" mba hoe ny fototra rongony sativa L. sy izay anisan'ny fototra izany, na mitombo na tsia, amin'ny vinanihefaka-sivy tetrahydrocannabinol fitanan'i ny tsy mihoatra ny 0.3 isan-jato amin'ny lanja fototry maina. Heveriny rongony sativa L. hitsena fa fitanana voafetra raha misy olona mitombo ny fomba fikirakirana azy io ho tanjona ny fanaovana orinasa hemp-panjakana araka ny lalàna.
DEA: "Ny zava-mahadomelina vaovao fehezan-dalàna (7350) hampitoerina amin'ny [ny Fitsipika] dia tsy ahitana fitaovana na vokatra izay voahilika avy amin'ny famaritana ny rongony voalaza ao amin'ny maso akora Act (CSA). Ny fehezan-dalàna vaovao dia ahitana ihany no fanafody voajanahary koa omen'ny ireo izay latsaka ao anatin'ny famaritana ny CSA ny rongony. Raha vokatry Nizara fotsiny ny ampahany amin'ny rongony fototra nesorina ny CSA famaritana ny rongony, vokatra toy izany dia tsy ho tafiditra ao amin'ny fehezan-dalàna zava-mahadomelina vaovao (7350), na ao amin'ny fehezan-dalàna ho an'ny zava-mahadomelina rongony (7360) "
Inona no soa azo avy CBD?
CBD (cannabidiol) manome ny tena karazany ny tombontsoa ara-pahasalamana ao amin'ny rongony ara-pitsaboana, fa tsy ny voka-dratsin'ny THC. Amin'ny toe-javatra pitsaboana CBD naseho mba hanampiana Fifaliana homamiadana, anaro nifanintontsintona, mamaivay, fanahiana, maloiloy, adin-tsaina, ambany tosidra, aretin'andoha sy ny maro hafa olana ara-pahasalamana. Misy tatitra milaza fa ambony concentrations ny CBD afaka raha ny marina kokoa ny vokatry ny THC. Na dia tsy afaka manao fitarainana raha ny amin'ny vokatry ny CBD, Cannabidiol menaka, na hemp CBD menaka, isika sy ny fahazoan-dalana hidirana mpiaro mitady irery ny mahasoa ny CBD.
Ho I mahazo "ambony" avy CBD?
No. Hemp hanesorana ny vokatra rehetra vita amin'ny hemp indostrialy, izay tsy manana afa-mamantatra THC dia be, ka tsy misy vokany psychoactive tsy mandray ny vokatra. Ny THC izay ny psychoactive singa rongony.
Inona no soa azo avy amin'ny fampiasana hemp?
Hemp misy vidiny nutitional tsara, manome sakafo singa manan-danja antsoina hoe Tena ilaina Fatty amine fa olona tena tsy mamokatra ho azy, ary tsy maintsy ho levona ny sakafo. Ankoatra izany, vao misondrotra fikarohana siantifika manohana ny fanjifana ny CBD avy hemp diloilo, ho ankapobeny-panahy sy miaro anao ho salama, nefa tsy mahazo anao "ambony". Tsy vitan'ny hoe hemp azo havaozina sy ny fifadian-kanina-maniry, efa ho isaky ny ampahany amin'ny zavamaniry dia useable - ho an'ny sakafo, fibre, fitaovana sy solika, miaraka amin'ny tombanana ho 25.000 fampiasana. Hemp sequesters CO2, ary tsy mila herbicides hiroborobo. Izany ihany koa ny mandao ny tany amin'ny toe-javatra tsara kokoa noho ny teo aloha, raha tsy mbola nambolena.
Rehefa nitondra ampy, io amin'ny ankapobeny ihany no maka ny 20-30 minitra fa ho mahomby. Ny ankamaroan'ny olona, ​​rehefa nanomboka nivoaka voalohany, tsy mahalala izay hitranga ary matetika no manadino fa manomboka mba hanampiana ny toe-javatra. Koa satria tsy misy "ambony" ny tatitra, ny ankamaroan'ny olona tsy mahafantatra fa ny manao na inona na inona. Rehefa afaka kelikely ihany no ho hitan'izy ireo fa misy fanaintainana mety ho nananan'izy ireo intsony any na tsy ho mafy. Ny "fahatsapana" Tena saro-takarina fa matetika, dia izay rehetra mahay ho fantatra dia an-kolaka mampitony. Taorian'ny fampiasana maro dia maro ny olona no nilaza fa izy ireo izao mahita azy io hoe "mandray lelan" eny minitra taorian'ny fitantanana. Kanefa, ho an'ny maro vao tonga, dia manantena fiovana lehibe sy ny vao Tsy mba toy izany, raha tsy hoe tena nampiasaina noho ny fanaintainana fitantanana. Ny malefaka famotsorana ny fanaintainana matetika somary miharihary, rehefa nandray ireo vokatra araka ny tokony be.
Rehefa mampiasa ny Vape Oil, ahoana no mahalala CBD be mahazo aho?
Ahoana no ankamaroan'ny olona any momba izany dia noho ny manana cartridge iray natokana ho amin'ny Hemp Vape Oil. Izy ireo mametraka ny cartridge teo ny vape penina sy mampiasa azy io tsindraindray mandritra ny andro. Amin'ny alalan'ny fahafantarana ny fitanan'i ny CBD ao amin'ny vape-dry zareo mampiasa menaka, izy ireo dia afaka manao kajy hoe hatraiza CBD any an-cartridge rehefa hofenoiko. Ohatra, ny menaka vape manana ny CBD 25mg isaky ny 1.5ml ny vape menaka. 1.5ml dia mahazatra vola mba hamenoana ny cartridge (fa tsy ny vola ihany ..... ka zatra araka ny cartridge ampiasainao). Noho izany, rehefa mampiasa ny 100mg 10ml vape menaka, raha misy olona te 20mg ny CBD, izy ireo vape feno cartridge 2ml isaky ny nampiasa azy io. Fa, indray, arakaraka ny fomba ela ny tarihiny dia natao tao koa vokany eo amin'ny tena mahazo an CBD raha ny marina ny olona iray ny vatana.
Ny 100mg 1oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana ny CBD 10mg isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 1ml.
Ny 300mg 1oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana ny CBD 30mg isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray ny 1 / 3ml.
Ny 500mg 1oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana ny CBD 50mg isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.2ml.
Ny 1000mg 1oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana 100mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.1ml.
Ny 100mg 15ml tavoahangy: Ny Vape Oil manana 20 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 1.5ml.
Ny 300mg 15ml tavoahangy: Ny Vape Oil manana ny CBD 20mg isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.5ml.
Ny 500mg 15ml tavoahangy: Ny Vape Oil dia manana 100 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.3ml.
Ny 1000mg 15ml tavoahangy: Ny Vape Oil dia manana 200 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.15ml.
Ny 100mg 3oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana 10 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 3ml.
Ny 300mg 3oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana ny CBD 10mg isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 1ml.
Ny 500mg 3oml tavoahangy: Ny Vape Oil manana 50 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.6ml.
Ny 1000mg 3oml tavoahangy: Ny Vape Oil dia manana 100 / 3mg ny CBD isaky ny 1 ml ny vape menaka. Noho izany, ohatra, raha te 10mg ny CBD, dia handray 0.3ml.
Inona no harato V +?
Matokia, mivarotra ny vokatra isika rehetra dia ara-dalàna sy ny Fanjakana 50 eo ho eo eran-tany amin'ny firenena 40. Tsy mila na levitra na ny fitsaboana karatra ao amin'ny United States. Raha any amin'ny firenena hafa, azafady jereo ny lalàna eo an-toerana. Maro ny firenena no nanomboka CBD dalàna ny solika avy amin'ny rongony, ary ny sasany fanjakana no nifidy azy io. Raha CBD no CBD ka tsy maninona na avy amin'ny rongony, na hemp fa ho mahomby, satria rongony manana olana ara-pitsarana, CBD solika avy any Marijuana mety na mety tsy ho ara-dalàna ao amin'ny fanjakana. Fa, CBD solika avy any Hemp ara-dalàna ao amin'ny firenena 50 rehetra, na inona na inona ny toetrareo ny lalàna momba ny rongony sy ny rongony CBD Oil.
Dia handalo ny Zava-mahadomelina aho, rehefa avy mampiasa ireo Test Products?
Efa nanoratra lahatsoratra iray manontolo eo amin'ny Blog Page momba izany. Tsindrio ny lohateny manaraka izao ny mahita: NO CBD HAMPITOERANA olona HAMANDRIKA TSARA ON Screen zava-mahadomelina?
Nahoana no tena lafo vidy?